အဆိုပါ 10 အကောင်းဆုံးမှတ်စုယူပြီးစာရေးဆရာများများအတွက် apps များ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
စာရေးဆရာများများအတွက် 10 အကောင်းဆုံးမှတ်စုဆည်းပူးနေ apps များ
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » စာရေးဆရာများများအတွက် 10 အကောင်းဆုံးမှတ်စုဆည်းပူးနေ apps များ
အဆိုပါအစဉ်အဆက်-ပြောင်းလဲနေတဲ့အစဉ်အမြဲဖွံ့ဖြိုးဆဲမိုဘိုငျးဖုနျးစက်မှုလုပ်ငန်းကျနော်တို့လိုအပ်တဲ့အရေးအသားအများစုသို့မဟုတ်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်တစ်ဦးမှတဆင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ကြောင်းဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုစံစက္ကူနှင့်ဘောပင် setup ကိုနည်းများအနည်းငယ်ခြားနားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဟာ android ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များနှင့်အတူသူတို့ကိုအစားထိုးခွင့်ပြုခဲ့သည် android ဖုန်းများအတွက် notepad ငါ့ကိုအဲဒီမှာအထဲကသူတို့၏အမျိုးအဘယ်သူမျှမတိုတောင်းသောဝယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားလည်းမရှိ, သင်ပြောပြ app နဲ့ကုန်အံ့။ ဒါကအတိအကျအဘယ်ကြောင့်ထွက်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်စာရေးဆရာများများအတွက် 10 အကောင်းဆုံးမှတ်စုဆည်းပူးနေ apps များ၏ဤစာရင်းလုပ်နေပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Exposition ၏မျိုးတွင်နှင့်အတူအလုံအလောက်, ကျွန်တော်တို့က၎င်း၏ notepad app ကိုဘုန်းအသရေ၌ရှိသမျှထဲမှာငါတို့ဥစ်စာ၏ဤစာရင်းကိုကြည့်ရှုကြကုန်အံ့:
notepad, ညာသင့်ရဲ့ Android အပေါ်သစ်တစ်ခု, အဆင်ပြေခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းသော notepad ။ notepad သင်၏လက်ကိုမှာအမြဲဖြစ်တယ်, သင်ရုံသင်ပြုသို့မဟုတ်သင်မေ့လျော့ချင်ကြပါဘူးဘာသင်ပင်သင်တို့အဘို့ထိုသို့ပြုမယ်လို့မကယ်မပါဘူးစခွေငျးငှါလိုချင်တာတွေရေးချဖို့ရှိသည်။
သငျသညျဆောင်းပါးတွေအများကြီးစွန့်ခွာလိုခြင်းနှင့်သင်လိုချင်သောတဘယ်မှာမသိကြသလော အကယ်. အသစ်ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ကို Notepad စားခွက်စာရွက်များရေးသားခြင်းအတွက်ကျောင်းသားများအတွက်ဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်အလွယ်တကူရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးဖန်တီးမှုလူတစ်ဦးဖြစ်ပါသလား သင်သည်သင်၏အတွေးအခေါ်များမှတ်တမ်းတင်ဒါပေမယ့်လည်းပုံအဖြစ်ပုံကြမ်းပြုပါ, သို့ဖြစ်လျှင်ဤသစ်ကို notepad သငျသညျအဘို့ဖြစ်၏မှသာလိုအပ်!
ဒီ feature နှင့်အတူ, သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူပုံကြမ်း, ရေးဆွဲ, ဒါမှမဟုတ်လက်ရေး၏ပုံစံအတွက်မှတ်စုတစ်ခုလုပ်အဖြစ်မှတ်စုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ တောက်ပ palette နှင့်တက်ကြွသောအရောင်အဆင်းဟာပုံဆွဲကာလ၌လူအပေါင်းတို့သည်သင်၏ခံစားချက်များကိုဖော်ပြရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်။
ဒေါင်းလုပ် Android အတွက်အခမဲ့ဤနေရာတွင်
Xnotes - မှတ်စုများ, notepad, စေးကပ်မှတ်စုများ, မှတ်စုစာအုပ်
XNOTES ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်အာဏာ Notepad APP ကို ​​IS
စာသား, ဗီဒီယို, သီချင်း, အသံများနှင့်ဖိုင်များအားလုံးပူးတွဲ
အမျိုးအစားအလိုက် Group မှမှတ်စု
ရိုးရှင်းအစာရှောင်ခြင်းနှင့် useDATA ရန်လွယ်ကူ
Backup ကို, note ကိုစာရင်း restore မျှဝေ
Add, တည်းဖြတ်, အရောင်မှတ်စုများကိုဖယ်ရှား
စာရင်းသို့မဟုတ်ဇယားကွက်အမြင်အားဖြင့် display မှတ်စု
Daybook Android အတွက်ရရှိနိုင်မယ့်အခမဲ့, ပတ်စ်ကုတ်-protected ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒိုင်ယာရီ, ဂျာနယ်နှင့်မှတ်စု App ဖြစ်ပါတယ်။ Daybook တစ်နေ့တစ်လျှောက်လုံးလှုပ်ရှားမှုများ, အတွေ့အကြုံများ, အတှေးအများနှင့်အတွေးအခေါ်များမှတ်တမ်းတင်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာသင်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းအတွက်အတိတ်ကာလမှသင်၏ created ဒိုင်ယာရီ / ဂျာနယ် entries တွေကိုသို့မဟုတ်မှတ်စုစုစည်းပေးနိုင်ပါတယ်။
•ကာကှယျစောငျ့ရှောကျ memory: Daybook အလွယ်ကူဆုံးလမ်းအတွက်ပုဂ္ဂလိကဒိုင်ယာရီ, စာအုပ် ', ဂျာနယ်များနှင့်မှတ်စုရေးဖို့နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးကစြီထုံးစံ၌အမှတ်တရများမှတ်တမ်းတင်ရန်ကူညီပေးသည်။
•လုံခြုံရေးနှင့် passcode Protected: သော့ခတ်နှင့်အတူဂျာနယ်အဆိုပါနို့ထွက်ပစ္စည်းပုဂ္ဂလိကစောင့်ရှောက်ရန်ကူညီပေးသည်။ လုံခြုံရေး Code ကိုပုဂ္ဂလိကသင့်ရဲ့ entries တွေကိုစောင့်ရှောက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါ app ထဲတွင်သိုလှောင်ထားသောဒေတာများလုံလုံခြုံခြုံကာကွယ်ထားသည်
•လွယ်ကူတဲ့အသုံးပြုမှု: ဒါဟာလွယ်ကူတဲ့အသုံးပြုမှုရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ JOURNAL, သာလွန်ဒိုင်ယာရီ / ဂျာနယ်အတှေ့အကွုံနဲ့နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် tracker ။ ရှုပ်ထွေးဘယ်အရာကမှဘာမှနေ့စဉ်အရေးအသား၎င်း၏ရိုးရှင်းသောဒိုင်ယာရီ complicated- ။ ရုံဂျာနယ်မှတ်စုစာအုပ်ရေးသားကယ်တင်! ရိုးရှင်းသောဒိုင်ယာရီပြက္ခဒိန်မြင်ကွင်းအလွယ်တကူယခင်ကရေးထားလျက်ရှိ၏ဒိုင်ယာရီမှသွားလာရန်ကူညီပေးသည်။
•တ TIME ကကြင်ဖော်မဲ့ SIGN: အဘယ်ကြောင့်သေးသည်အခြားရဲ့ login အသေးစိတ်ကိုမှတ်မိဖို့ရှိခြင်းနှောင့်အယှက်? ဂျီမေးလ် / facebook ကို အသုံးပြု. အတွက်တစ်ကြိမ်သင်္ကေတပြ / device ကိုနှုန်းကိုအီးမေးလ်အိုင်ဒီစကားဝှက်နဲ့တစ်ဂျာနယ်ဒိုင်ယာရီဖြစ်ဖို့ကနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ app ထဲမှာထည့်သွင်း notepad ဒိုင်ယာရီနေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာပဲပတ်စ်ကုတ်နှင့်အတူဝင်ရောက်လိမ့်မည်။
notepad အခမဲ့စာသားကိုမှတ်စုဖန်တီးတည်းဖြတ်ရန်အသေးစားနှင့်အစာရှောင်ခြင်း App ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂါရပ်များ:
အခြားအက်ပ် (ဥပမာ Gmail ထဲတွင်မှတ်စုတစ်ခုပေးပို့ခြင်း) နဲ့ * ခွဲဝေမှုမှတ်စု
* လျင်မြန်စွာဖန်တီးရန်ခွင့်ပြု Widgets တွေသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ရန်မှတ်စု
ဒီ app က၎င်း၏ slick ဒီဇိုင်းနှင့် interface ကိုသွားလာရန်လွယ်ကူသောနှင့်အတူပြုလုပ်အခမဲ့များ၏အနိမ့်သောစျေးနှုန်းအားလုံးကိုသင့်ရဲ့အရေးအသားလိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်မည်, သူ့ဟာသူအဘို့အပြော၏။
သင့်ရဲ့မှတ်စုများနဲ့မှတ်စုများခြေရာခံခြင်းဒီချစ်စရာနှင့်အဆင်ပြေခဲ့ဖူးဘူး! ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ app ကိုသင်သည်သင်၏မှတ်စုစည်းရုံးနှင့်သင်အလွယ်တကူကြည့်ရှုသူတို့ကို access လုပ်နိုင်ဘယ်မှာသင့်အိမ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူတို့ကိုနေရာပေးနိုင်ပါတယ်။ To-do list များ, စျေးဝယ်စာရင်းနှင့်သတိပေးချက်များကိုဖန်တီးရန်ဒီ app ကိုအသုံးပြုပါ, သို့မဟုတ်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူမှတ်စုရေးချ!
, နောက်ခံအကြောင်းအရာများပြောင်းလဲနေတဲ့အားဖြင့်သင့်မှတ်စုစိတ်ကြိုက်အချို့ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောစတစ်ကာများကိုထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်တောင်မှသင့်ရဲ့မှတ်စုတိုရဲ့နောက်ခံအဖြစ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံကိုသုံးပါ! တစ်ဦးမှတ်စုတိုဖို့နှိုးဆော်သံ setting အားဖြင့်သတ်မှတ်ရက်သို့မဟုတ်အရေးကြီးသောရက်စွဲများသင်သတိပေး app ကိုအသုံးပြုပါ။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ဒီမှတ်စုတို widget က app ကိုသငျသညျကို Google Task ကိုနှင့် Evernote အတူကတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်သည်ကိုမူထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းများအတွက်အလွန်အခမဲ့, အလွန်ကောင်းသောမှတ်စုများ app ကို။
နေ့စဉ်မှတ်စုများ, Notepad, မှတ်စု
နေ့စဉ်မှတ်စုများတစ်ရိုးရှင်းပြီးအသုံး notepad app.Take မှတ်စုဖြစ်ပါသည်, သတိပေးချက်များ, အီးမေးလ်, မက်ဆေ့ခ်ျကို, စျေးဝယ်စာရင်း, ဓါတ်ပုံများနှင့်မှတ်စုများကိုထည့်သွင်း, ဗီဒီယိုနှင့်သင်တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသောအသံဖမ်းခြင်းနှင့်မှတ်စုပြင်ဆင်ထားရန်မှတ်ချက်ပြုတစ် notepad.Daily မှတ်စုများထက်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ပါသည် အခြားမည်သည့် notepad နဲ့သတိပေးချက်လျှောက်လွှာ။
နေ့စဉ်မှတ်စုများ, စာသား, မှတ်စုဆည်းပူးနေဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယို, အသံမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းပုံစံကိုသင်စာရင်းထဲကလိုခငျြသကဲ့သို့သင်တို့လျှောက်လွှာမှတ်စုဖွင့်သည့်အခါငါးကွဲပြားခြားနားသော formats.You မှတ်စု add နိုင်ပါတယ်ထောက်ခံပါတယ်။
လွယ်ကူသောမှတ်ချက်ရိုးရှင်းတဲ့ပေမယ့်ကြောက်မက်ဘွယ် notepad App ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျမှတ်စုများ, မှတ်စုများ, e-mail, မက်ဆေ့ခ်ျစျေးဝယ်စာရင်းနှင့်-do list များရေးသည့်အခါဒါဟာသင်တစ်ဦးအမြန်နဲ့ရိုးရိုး notepad တည်းဖြတ်ရေးအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။
လြယ္ကူမှတ်ချက်ကို Notepad နှင့်အတူမှတ်စုများကိုယူပြီးအခြားမည်သည့် notepad သို့မဟုတ်မှတ်စုတို pad ပါ app ကိုထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
ဒါဟာစီတန်း-စက္ကူ style အမျိုးမျိုးစာသားကို option ကို format နဲ့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာအသုံးပြုသူတစ်ဦးသည်စင်ကြယ် user interface ကိုနှင့်အတူဖော်ရွေများနှင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
လျှို့ဝှက်ချက်ဒိုင်ယာရီ - မှတ်စု & ဂျာနယ်
အသုံးပြုမှုလျှို့ဝှက်ချက်ဒိုင်ယာရီအပေါင်းတို့နှင့်တကွသင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှု, အတွေး, ခံစားခကျြနဲ့လုံးဝအော့ဖ်လိုင်းနှင့်ဤဟာ android မှတ်စုများ app ကိုနှင့်အတူအခမဲ့ Adventures စောင့်ရှောက်လော့။ အဆင်းလှသောနဲ့ interface ကိုအသုံးပြုပါရန်လွယ်ကူအားလုံးကို - ပုံများ, tag ကို entries တွေကို, လမ်းကြောင်းခံစားချက်, အလိုအလျှောက်ရာသီဥတုသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်ထည့်ပါ။
လျှို့ဝှက်ချက်ဒိုင်ယာရီအရာအားလုံးပုဂ္ဂလိကထားနိုင်အောင်စကားဝှက်နဲ့သော့ခတ်ထား, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိတ်ခံစားမှုအာကာသဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ, သင့်စာအုပ် 'ရှိခြင်းနဲ့တူရဲ့။
ဒါဟာလုံးဝအော့ဖ်လိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်သည် entry ကိုသာသင့်ရဲ့ device ကိုပေါ်သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ သငျသညျအဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်သင်၏အဂျာနယ်ဖတ်ပါလိမ့်မည် 100% သေချာစေနိုင်ပါတယ်။
မှတ်စုစာအုပ် - Sync ကိုမှတ်စုများကို ယူ.
မှတ်စုကို ယူ. စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းဖန်တီးစံချိန်အသံများနှင့် Notebook ကိုအသုံးပြုပြီးအချိန်လေးကိုဖမ်းယူ။ အားလုံးသင့်ရဲ့မှတ်စုချက်ချင်းဒီအခမဲ့ဟာ android မှတ်စုများ app ကိုနှင့်သင်၏ devices တွေကိုဖြတ်ပြီးနှင့်မိုဃ်းတိမ်င့်က်လုပ်နေကြသည်။
Notebook ၏ရိုးရှင်းသော, ရင်းနှီးသောဝမ်းမြောက်သောစိတ် app ကိုအသုံးပြုခြင်းမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကတိုင်းအသေးစိတ်ဖို့သတိထားရမှာ, သူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းအတွက်စေ့စပ်ခဲ့ပါတယ်။
မှတ်စုစာအုပ်မှတ်စုများကို ယူ. သင်တို့၏အကြံအစည်ဖမ်းဆီးဖို့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေပေးပါသည်။
- မှတ်စုရေးထားပါ။ အားလုံးအတူတူပါပဲမှတ်စု, ပုံများ, စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း, သို့မဟုတ်အသံ add, စာသားနှင့်အတူစတင်ပါ။
- ပူဇော်သောဓာတ်ပုံကိုမှတ်ချက်ကဒ် အသုံးပြု. အချိန်လေး Capture ။
အကြှနျုပျ၏မှတ်စုများ App ကိုနှင့်အတူသငျသညျနေ့စဉျသင်၏မှတ်စုများကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်အားဖြင့်သင်တို့ကိုတစ်နေရာတည်းတွင်အားလုံးသင့်ရဲ့မှတ်စုစည်းရုံးနိုင်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာထဲမှာသင့်ရဲ့မှတ်စုအဘို့အအရောင်များကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဤသည်မှတ်စုစာအုပ်စူပါအသိဉာဏ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်လင့်များ, ဖုန်းများနှင့်အီးမေးလ်ကိုအသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါ။
- အမြန်မှတ်စု Create
- သင့်မှတ်စုများအရောင် Add
- သင့်မှတ်စုများဓာတ်ပုံများ Add သို့မဟုတ်ဖမ်းယူ
ဒါဟာသင့်ရဲ့ android ဖုန်းပေါ်မှာမှတ်စုများနဲ့အခမဲ့အပေါငျးတို့သအောင်ဖို့အကောင်းဆုံးမှတ်စုစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်
ဤရွေ့ကား, နောက်ဆုံး app ကိုအားဖြင့်ငါတို့သည်ဟာ android ဖုန်းများအဘို့ထိပ်တန်း 10 အခမဲ့မှတ်စုများ app များကိုတစ်ဦးနီးကပ်ထံသို့လာကြ၏။ ကျနော်တို့ကဒီစာရင်းမည်သူမဆိုသူတို့အဘို့ပြီးပြည့်စုံသောမှတ်စုများ app ကိုရှာဘို့အတွက်လုံလောက်သော comprehenstive ယုံကြည်သော်လည်း, သင်သည်အခမဲ့မှတ်စု၏ပြီးပြည့်စုံသောစာရင်းချို့တဲ့စာရင်းထဲမှာသင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် app ကိုတွေ့လျှင်အဖြစ်အမြဲတွေ့နိုင်ပါသည် - ဒီမှာ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံး၏စာရင်းကိုများအတွက် Apps ကပ apk ပင်မစာမျက်နှာသွားရောက်ကြည့်ရှု android apk apps ။